Ungazikhetha njani iiglavu zewelding TIG
Uninzi lwabantu alunxibelelani negama le-welder kunye nomculi, kodwa kwimeko ye-TIG welding, uninzi lweewelders ezinezakhono zikuxelela ukuba ubukhulu becala olu luhlobo lobugcisa. I-TIG welding yenye yeendlela ezinzima kakhulu zenkqubo ye-welding, kwaye umgangatho wayo we-weld ulungile kwaye uzinzile, ofuna ...
Ukhetho oluchanekileyo noluchanekileyo kunye nokusetyenziswa kweendawo ezi-5 kwiigloves ezinobushushu obuphezulu
ngomphathi ku 20-07-06
Iiglavu eziphakamileyo ezinganyangekiyo kwiqondo lobushushu Njengoko igama libonisa, yindawo ekhethekileyo yokukhusela iigloves ezikhuselweyo ezisetyenziswa kwindawo ezinobushushu obuphezulu. Ubushushu obuphezulu kakhulu obuxubileyo nefayibha yemichiza iiglavu yesundu kunye nesalathiso somnwe wokunxiba esinganyangekiyo ...
Iiglavu ezili-10 eziqhelekileyo zokukhusela kwiinkcukacha kunye nokusebenza kwazo okukhuselayo
Isandla siyinxalenye ebaluleke kakhulu yomzimba wethu, kwaye umsebenzi kunye nobomi azinakwahluka kuwo. Ukusukela ngexesha lokuzalwa kwethu, ukuya esiphelweni sobomi, izandla bezisoloko zihamba. Kulusizi ukuba sihlala sikutyeshela ukubaluleka kwayo kunye nokukhuselwa kwezandla zethu, ukuze ...
Izixhobo ezisibhozo zeekhuselo zekhemikhali kunye namanqaku ngokweenkcukacha
Iiglavu zokhuselo zemichiza Yinxalenye ebalulekileyo yemveliso yemichiza kwaye inokukhusela impilo yabasebenzi. Abantu abaninzi bayazi iiglavu zokukhusela imichiza, kodwa abazi ngokwaneleyo ngayo. Nazi iindidi ezisibhozo zezixhobo zeglavu zokukhusela iikhemikhali, kunye nebry ...